4 Siyaabood oo Istaraatiijiyadda Maaraynta Soo Bandhigistaada - ama Loogasho la'aanteed - ay tahay Waqti luminta, Kheyraadka iyo Ganacsiga | Martech Zone
4 Siyaabood oo Istaraatiijiyadda Maareynta Bandhiggaaga - ama Loogasho la'aanteed - ay tahay Waqti luminta, Kheyraadka iyo Ganacsiga
Talaado, Disembar 15, 2015 Arbacada, December 16, 2015 AlexAndra Ontra
Ma iga caawin kartaa inaan isku soo bandhigo bandhiggan? Kulankeygu waa saacad gudaheed. Ma heli karo boodhka.
Taasi waa boodbood qaldan.
$ #! * Taasi waa sagxad qaldan
Dhawaaq miyaa? Markaa MA AAD adeegsanaysid istiraatiijiyad maarayn bandhig wax ku ool ah. Iyo, natiijada, waxaad luminaysaa waqti, ilo iyo, wixii intaa kahoreeyay, ganacsi. Maareynta soo bandhigida waxay xaqiijineysaa in farriinta saxda ah la isugu gudbiyo xilliga ugu adag - marka qofka wax iibinayaa uu la hadlayo macmiilkiisa. Maxaa dhacaya, ama aan ahayn, transpire inta lagu jiro kulankaas wuxuu si toos ah u saameynayaa gunta. Waa guul ama guul darro.
Maareynta bandhiggu wuxuu u ciyaaraa guul. Qeexitaan ahaan, waa habka rasmiga ah ee loo abuuro, loo keydiyo, loo soo bandhigo, loo wadaago, loo cusbooneysiiyo loona raad raaco dhammaan feylasha loo isticmaalo sameynta bandhigyada. Ficil ahaan, maareynta soo bandhigida waxay hubineysaa sumadda iyo xakameynta farriinta Suuqgeynta, dhammaantood iyadoo ka dhigeysa mid deg deg ah oo sahlan Suuqyada si loo abuuro loona wadaago waxyaabaha la soo bandhigayo.
Istaraatiijiyad maaraynta soo bandhigida codka ah ayaa kaa caawin doonta inaad ka fogaato khaladaadkan guud - samaynta qof kasta oo kooxdaada ka mid ah, howlaha oo dhan, wax soo saar badan oo wax ku ool ah si loo gaaro himilooyinkooda.
Ka soo qaad in dadka iibka ahi ay yaqaanaan halka laga helo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. - Waxay ku jirtay S: Gawaarida qaar Suuq-Galin galka, Sharepoint, ama waxaa laga yaabaa in lagu soo diray emayl ballaaran, oo leh ogeysiis weyn. Faylka waxaa lagu aasay shabakad, goobta shaqada ama sanduuqa Inbox, oo midkoodna uusan lahayn astaamo raadin horumarsan si loo weyneeyo oo loo ogaado in hal mililood hal milyan kujiro. Midkoodna kuma bixiyo wax faa iido ah abuurista ama habeynta feyl cusub oo ujeeddo kulan cusub ah. Maareynta soo bandhigida ayaa dhigeysa waxyaabaha ugu dambeeyay uguna dambeeyay qofka iibiyaha hortiisa. Waxay hubisaa in farriinta loo hoggaansamo.
Ka soo qaad in qof kastaa uu leeyahay nuxur waafaqsan, oo casriyeysan. - Waxaa loo sheegay qof walba, laga yaabee emayl ahaan, Chatter feed, ama kulanka xaaladda, in uu jiro nooc ka cusub, ka sii wanaagsan, oo sharci lagu ansixiyay. Nasiib darrose, bani’aadamku waa abuur caado leh. Caadada ay caadeystaan ​​qofka wax iibiyaana waa inuu qaataa feylkii shalay oo fadhiya miiskiisa oo uu dib u isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, wuu ogyahay nuxurkaas, wuuna ku fiicnaa shirkii ugu dambeeyay. Xalka saxda ah ee maaraynta soo bandhigida ayaa ka dhigi doonta sida ugu fudud qofka iibiyaha ah inuu u abuuro sagxad cusub kulankiisa soo socda, maadaama ay ahaan laheyd in la isticmaalo xoogaa duug ah oo miiskiisa ku fadhiya. Waqtiga ayey ilaalisaa.
Aan la xiriirin iibka. - Inkasta oo qof kastaa uu ka shaqeynayo isku ujeedo, Iibinta iyo Suuqgeynta waa habab kala duwan. Qofka iibka wanaagsan wuxuu isku dayayaa inuu gaaro tiradooda, oo uu soo galo dakhli. Suuqgeeye wanaagsan ayaa dhisaya sinaan sumadeed iyada oo loo marayo sheyga shirkadda iyo bixinta adeegga iyo farriinta. Midna waa muddo gaaban, midna waa dheer yahay. Labaduba waxay muhiim u yihiin guusha shirkadda. Adeegsiga astaamaha bulshada ee ganacsiga, xallinta maaraynta soo bandhigidda waxay mideyn doontaa iibka iyo howlaha Suuqgeynta, si qof walba uu ula wadaagi karo aqoonta si iskiis ah, waqtiga dhabta ah, isla markaana uu ula jaanqaadi karo si waafaqsan. Waa guul-guul.
Uma dhaqmeyno soo bandhigida cunsur ka mid ah isku dhafka isgaarsiinta. -
Suuqyayaashu waxay ku qarash gareeyaan balaayiin doolar naqshadeynta astaanta saxda ah, farsameynta boos, sameynta degello internet, buugaag yar, baro TV iyo xayeysiisyo kale iyo dammaanad, laakiin soo bandhigida iibku waa fikir kadib. Dharbaax astaan ​​iyo asal quruxsan shaxdaas PowerPoint iyo Go, Go, Go… Iib! Qofka wax iibiya waxa uu yiraahdo, iyo sida ay u dhahaan, waa farqiga u dhexeeya guuleysiga iyo luminta ganacsiga. Soo bandhigida iibku waa qayb dammaanad ah; waa cunsur u gaar ah isku dhafka isgaarsiinta, waana inaan loola dhaqmin sidii feker kadib. Waxay u qalantaa dareen dheeraad ah labada Suuqeyn iyo Iibsi intaba.
Maareynta soo bandhigida waxay xaqiijineysaa in ilaha ugu wanaagsan ee shirkaddu ay ku jiraan talooyinka qof kasta oo iibiya faraha, iyo in qof kasta oo suuq geynaya uu toos u helo bartilmaameedkiisa. Waxay ku saabsan tahay farsameynta farriinta saxda ah ee iibka, iyo hubinta in dadka wax iibiya ay soo saari karaan oo ay la jaan qaadi karaan shirarkooda shaqsiyeed, daqiiqado gudahood - saacado maahan oo hubaal maahan maalmo. Adoo kor u qaadaya soo bandhigida iibka iyo habka loo abuurayo bandhigyadaas isku dhafka suuq geynta, shirkad ayaa sii faa iideysaneysa maalgashikeeda suuq geynta, waxayna si toos ah ugu dabaqeysaa khadka hoose.
Ku saabsan Shufflr
Shufflrr waa nidaam maareyn fayl ah oo suuq-geynta iyo iibintu u adeegsan karaan abuurista, wadaagida, iyo joogteynta bandhigyada guud ahaan ururkaaga.
Tags: korontobandhigmaaraynta bandhigga
AlexAnndra Ontra waa wada-aasaase iyo madaxweyne Shufflrr, Xalka maareynta dukumiintiga baahida loo qabo bandhigyada firfircoon. Shufflrr oo fadhigiisu yahay magaalada New York waa hormuudka Maareynta Soo Bandhigida. Waxaa aasaasay 2014 James iyo AlexAnndra Ontra, oo ah koox walaalo walaalo ah oo in ka badan 30 sano khibrad u leh soo saarista softiweerka maareynta, Shufflrr wuxuu ka caawiyaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka adeegsada inay maareeyaan, u qeybiyaan oo cusbooneysiiyaan waxyaabaha ay soo bandhigayaan, iyaga oo u badbaadinaya waqti iyo lacagba.
5 Cabirka Hufnaanta Hawlgallada Suuqgeynta
Wishpond: Ku Sameynta Mawjadaha Jiilka Lead iyo otomaatiga